Umculo Umculo weLatin
Ukuba unesimo sengqondo ukuhambisa izitya zakho kwi-salsa okanye kwi-samba, okanye ufuna nje ukuzizonwabisa ngokuhlwaya kwabadlali abanetalente kwiingxondorha ezitshisayo, noluhlu lweefilimu ezibukeleyo, elowo luqulethe enye okanye eminye imibukiso emikhulu yokudansa kweLatin. Baya kuba bobuphefumlelweyo, bevutha loo maphupha omdaniso obunzima, okanye ubusuku obumnandi kwiifikrini.
Ukuba i- salsa izisa ubuso bakho, ke le yile filimu. Kukhona i-salsa enye ngomzuzu ngo-1998 kuDaniso kunye nam kunokuba nayiphi enye ifilimu yaseHollywood ndiyazi. Umculi wasePuerto Rican uChayanne noVansa Williams, i-cameos i-DLG, iAlbita kunye noMakina Loka kwinombolo yomdlalo wokudansa.
Isandi sazo siquka iingoma ezivela kwimimandla emikhulu yamaLatin, kuquka uGloria Estaban, uRuben Blades, uSergio Mendes kunye noJon Secada
Ndabona kuqala inguqulelo yaseJapane yale filimu kwaye ayikwazanga ukuhleka, nangona ukudansa kwakumnandi ukubukela. Ukuba awunakulungele ukwenza i-movie ngesiJapan (ngesihloko esesiNgesi), uRichard Gere / Jennifer Lopez ingu- Shall We Dance? Kwaphuma iminyaka embalwa kamva, ngo-2004. Ndicinga ukuba i-original iscono, kodwa isimo se- tango , esenziwa kumculo we-GoTan Project sika "Santa Maria (del buen ayre)" , yenza ukuba i-remake ibukele ukubukela.
Ifilimu inezinto ezininzi zeenombolo zomdaniso, ngoko kuya kuba nomdla kumntu onomdla ngokudanisa ibhola.
Ayikwazi ukufumana uhambo oluya eRio? Vula ifilimu ye- Black Orpheus ka-1959 kwaye uzisa izandi ze- samba zeCarnaval ngqo kwindawo yakho yokuhlala.
Le movie yeklasikhi, ibali lika-Orpheus no-Euridice, alinanto nje yomdaniso omnye kuyo - yonke i-movie yindlela yokuhamba yaseBrazil. Umculo nguAntonio Carlos Jobim noLuis Bonifa.
I-Orpheus ebomvu yayiyimpumelelo ebalulekileyo, iphumelele kwiPalm d'Oward ngo-1959 I-Cannes Film Fesitival, i-Award Academy Award ye-Outline ye-Outline ye-1960, kunye ne-1960 Golden Globe Awards ye-Film ye-External Foreign Film.
I-Ballroom eqineleyo ihlala yinto yam intandokazi, eyenzekayo kwilizwe lase-Australia. Ifilimu yaseBaz Luhrmann yokuqala (1992), inomdla womdaniso omangalisayo owenziwe kwiDoris Day "Mhlawumbi, Mhlawumbi, mhlawumbi" kunye ne-Paso Doble ephezulu-ngaphezulu ye-Luhrmann.
I-Ballroom eqinekileyo yinto enemibala eyokwenza uhlekise ngokukhawuleza.
I-Mad Hot Ballroom yincwadi ekhangayo ye-2005 malunga neNew York City yesikolo ebantwini abaphumelela ekuncintiseni komdaniso webhola, nokufunda izifundo zentlalo kunye nesidima endleleni. Ixesha elihle kwifilimu luvuyisayo olusasazekayo lwabantwana nanini nawafumana ithuba lokwenza i- merengue .
Abafaki bebhayisikobho bawubukela ngokuphindaphindiweyo; kulungile ukufuna ukuqokelela kwakho.
Unokucinga ukuba nayiphi na i-movie kunye no-Antonio Banderas ukudansa kuya kufuneka ibe yinto emangalisayo - ngakumbi kubaphulaphuli besifazane. Hayi, le movie ayikho into enhle, kodwa kuluhlu lwam ngezizathu ezibini. Okokuqala, ibali likaPeter Dulaine, indoda eyaqalisa inkqubo yokudanisa evezwe eMad Hot Ballroom . Okwesibini (ndivuma), linika ithuba lokuba iBanderas idanisa i-tango iiyure.
Thatha iNkokeli ngeendlela ezininzi uguqulelo olucacileyo lwe- Mad Hot Ballroom , kunye nomgca wecala obonisa uBanderas njengomfundisi ofundisa abantwana ngobugcisa bokudanisa ibhola.
I-Lambada yenziwe ekuqaleni kwee-1990 xa kuvela igama lokuba urhulumente waseBrazil uvalwe umdaniso. Akusiyo ifilimu enhle, kodwa ukuba unomdla wokubona umdaniso owawunqatshelwe kwilizwe apho i-samba yaseBrazil isigqoke ngobusuku ebusuku, le yindawo yokuyibona.
Ekuqaleni, eli phephancwadi lakhutshwa ngokukodwa ngeDanki engavumelekanga (iphepha elilandelayo).
Le filimu ibhetele kuneyokudlulileyo, kodwa kungekhona kakhulu. Sekunjalo, uninzi lwe-lambada!
I-lambada ngumdaniso ovela e-Afrika, nangona isiPutukezi saseBrazil sisifake isitampu kuso ngokukhawuleza. Igama elithi lambada lithetha, ngokuthe ngqo "ukubetha okuqinileyo" okanye "ukubetha" ngesiPutukezi, kodwa njengexesha lomdaniso, libhekisela kwindwendwe enjengobungqingili beedlalisi, ekwahlula i-lambada kwezinye izidaniso zaseLatini.
I-classic ye-1987 , Ukudansa okungcolileyo , ayifuni isingeniso. Iikhopi ezingaphezu kwezigidi ezi-1 ziphethwe ngamashishini e-movie kwividiyo yasekhaya. Ukubukela umntwana ufunde ukwenza loo nto akuzange aphele kum. Kodwa uya kucebiswa kakuhle kwi-remake ye-2011, kunye nesalathisi sayo esibi, ukuziphatha okubi nokubi.
Eyaziwayo yilo mfilimu ukuba umkhosi we-Dirty Dancing festival uqhutywe kwiLake Lure, North Carolina ukususela ngo-2009. [Isithombe ekhasini 9]
Ifilimu ka-1940 iTyrone Power / Linda Darnell I-Mark of Zorro kuluhlu kuba umda wokudanisa phakathi kweenkwenkwezi ezimbini ngenye yezintandokazi zam, nakuba andiqinisekanga ukuba ngaba kungenxa yeyona 'nombolo' yokudansa yeCalinio, okanye intetho yenkohlakalo kunye nehlekisayo ngexesha lomdaniso. Kukho kwezi zizathu kwenza ifilimu iboneke.
Ingxelo ye-1940 yale filimu yindlela yokubuyisela ifilimu ecetywayo ngo-1920 ehamba noDouglas Fairbanks. Qaphela ukujonga ifilimu efanelekileyo - inguqulo ye-1920 ayikho idaniso.
KwiDessert: Umsindo womfazi
Ukuba ubonile zonke iifilimu kwi-Top Ten, kwaye unomdla wokufuna ngaphezulu, khangela i- Scent ye-Woman Scent ka- 1992 , apho i-Al Pacino eyimfama idansa i-tango enomdla kwaye inamandla kunye nomdlali we-actress uGabriella Anwar.
U-Al Pacino uzuze i-Award Academy ye-Award for the best actress kule filimu, ngoko kuyafaneleka ukujonga kumaqela amaninzi.
Iimpawu ze-Latin Music Essential
Iingoma ezidumileyo zeSalsa Songs
Iimbali zamaKrismesi zeKrisimesi Umculo
Iingoma ezininzi zeIconic nguJenni Rivera ochaphazelekayo
Fonseca - Bio, Discography ne Top Songs
Ubaba u-Yankee - u-Reggaeton Pioneer kunye nosomashishini
I-Top 10 ye-Romantic Singer Singers yaseLatin Umculo
Imfazwe Yehlabathi II: iTirpitz
Ngaba AmaYuda Akholelwa KuSathana?
Imbali emfutshane yeLesotho
Indlela yokufaka i-Transmission Cooler
Imbali yeNkcubeko zeKrismesi
Ukukhutshwa kweeNxalenye zeDenominators eziqhelekileyo
I-University of Bloomsburg yasePennsylvania
Biography kaLuigi Galvani
I-Gram yeMali yeMelecular Definition
Indlela yokufunda iTire yakho
Mabon Ukulinganisela Ukucamngca
Iingoma eziphezulu zeYolanda Adams
Ukuthi 'Okulandelayo' ngeSpanish